Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Galmee caancala jedhu filadhu
Lakkoofsa boqannaa fi/yk maqaa boqonnaa saaga.
Galmee ammaatiif maqaa faayilaa fi/yk xurree galeeloo, akkasumaas, dheertoo malee maqaa faayilii saaga.
Lakkoofsa fuulaa kan fuulaa ammaa, duraanii, yk itti aanuu saagi.
Dirreewwan wabiif akka dhangii "lakkoofsa boqonnaatti" yoo filattee, dirree keessaa lakkoofsa kan mataduree boqonnaa wanta wabeefame of keessaa qabu qofa agarsiisa. Mataduree boqonnaa kanaaf haalata keewwataa yoo lakkoofsi hinlatamneef, dirrichii duwwaa tahe hafa.
Alaaguuf alerguu HTML kan dirreewwan guyyaaf yerootiif, dhangiiwwan LibreOffice addaatufayyadamma.
Guyyaa/bixxii keessatti iddoodii
Dirree guyyaa yk yerootti, iddoodii fayyadamuu barbaaddu sana saagi.